LED Bay Bay နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိထားရမယ့်အရာများ Taiwan မှ LED Bay Bay ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်အထူးပြုထောက်ပံ့နှင့်တင်ပို့ LED Bay Bay။ ထောက်ပံ့ရေး၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရုပ်သံလိုင်း၏တည်ငြိမ်သောအခြေခံအကျဆုံးနှင့်အတူကျနော်တို့အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောဝန်ဆောင်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ clients များကျေနပ်အောင်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောနှစ်ရှည်သမဝါယမမိတ်ဖက်အဖြစ်အများအပြားအရည်အချင်းပြည့်မီသောပစ္စည်းပေးသွင်းသူများသည်ကိုင်လော့။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဘုံ prospect.Also ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အလို့ငှာတန်းတူရေးနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးအပေါ် အခြေခံ. လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်လူတွေနဲ့အတူသမဝါယမကြားဆက်ဆံရေးထဲသို့မဝင်ရဖို့မျှော်လင့်ကျနော်တို့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်သည်လည်းငါတို့နှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးတိုးမြှင့်ဖို့ပြည်ပမှာဝယ်လက်ကြိုဆိုပါတယ်။
ပုံစံ - U5 LED Patio Light 180-250W 56°x 95°
အဓိကအားဖြင့်မိုးလုံလေလုံအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်/ပြင်ပနှင့်စက်မှုအလင်းရောင်,high power LEDs high bay light သည်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် lumen ကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်(lm)ပိုမိုမြင့်မား lux အောင်မြင်ရန်/အကွာအဝေး.ShinyU high bay light သည်စက်မှုလုပ်ငန်း၏အဓိကကျသောကဏ္ are ဖြစ်ပြီးထိရောက်သောဖြေရှင်းမှုအတွက် ဦး ဆောင်နေသည်,ဖောက်သည်များအနေဖြင့်သူတို့၏ ၀ ယ်ယူမှုကုန်ကျစရိတ်များကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်ထုတ်လုပ်သူများအားမြင့်မားသောရွေးချယ်မှုကိုပေးရန်ကူညီခြင်း-စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောပင်လယ်အော်အလင်း LED.
150W မှ 300W သို့ ၇ ခုသာအာရုံစိုက်ပါ.1 ကီလိုဂရမ်
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.ledlightfixtures.org/my/led-bay-lights.html
အကောင်းဆုံး LED Bay Bay ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် LED Bay Bay မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ